Cardinal Pell: "O doro anya na" Ndi Nwanyi Ga-enyere "Ndị Sentimental Aka" Hichaa Ego Vatican | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Kadịnal Pell: womenmụnwaanyị "doro anya" ga-enyere ndị "sentimental nwoke" aka ihicha ego Vatican
Mgbe ọ na-ekwu n’oge webinar nke ọnwa Jenụwarị 14 gbasara nghọta ego na inka Katọlik, Kadịnal Pell toro ndị a họpụtara dị ka "ụmụ nwanyị tozuru oke nwere ezigbo ọrụ ọkachamara."
Kadịnal George Pell nabatara na Pope Francis tinyere ụmụnwaanyị nkịtị na kansụl azụmahịa Vatican, na-ekwu na ọ nwere olile anya na "ụmụ nwanyị nwere obi ụtọ" ga-enyere "ụmụ nwoke nwere mmetụta aka" aka ime ihe ziri ezi gbasara ego Churchka. .
Na August 2020, Pope Francis họpụtara ndị otu ọhụrụ 13, tinyere Kadịnal isii, ndị nkịtị isii na otu onye nkịtị, na Council for Economy, nke na-ahụ maka ego Vatican na ọrụ nke Secretariat for the Economy.
O kwuru, sị, "Enwere m olile anya na ha ga-edo anya nke ọma n'okwu ndị a ma na-ekwusi ike na anyị bụ ụmụ nwoke nwere ezi uche jikọrọ ọnụ ma mee ihe ziri ezi."
"Na ego anaghị m ama na Vatican nwere ike ịga n'ihu na-efuna ego ka anyị na-efufu ego," Kadịnal Australia gara n'ihu. Pell, onye bu onye isi nke Isi na Economy site na 2014 rue 2019, kwusiri ike na "karia nke a, enwere ezigbo nsogbu ... site na ego ezumike nka."
Kadịnal ahụ kwuru, "Grace agaghị agụpụ anyị n'ihe ndị a".
Kadịnal Pell, bụ onye a tọhapụrụ n'afọ a ka ọ ghọrọ onye ụkọchukwu Katọlik kachasị n'ọkwá kachasị elu maka ikpe arụrụala, bụ onye ọbịa okwu na webinar akpọrọ "ingmepụta Omenala Na-enweghị Okpukpe na Churchka Katọlik", nke akwadoro site na Global Institute of Church Management (GICM).
Ọ zara ajụjụ gbasara etu esi enweta nghọta ego na Vatican na diọcese Katọlik na ọgbakọ ụka.
Ọ kọwara nghọta ego dị ka "ịhapụ ihe na ihe ndị a", na-agbakwunye, "ọ bụrụ na ọgba aghara dị, ọ dị mma ịmara."
Enweghi nghọta na mmeghe na-eme ka ndị Katọlik dinaa mgbagwoju anya na nchegbu, ọ dọrọ aka ná ntị. Ha kwuru na ọ dị ha mkpa ịmata ihe "na a ga-asọpụrụ nke a ma zaa ajụjụ ndị bụ isi ha".
Kadịnal ahụ kwuru na ya kwadosiri ike inyocha diocese na ọgbakọ okpukpe dị iche iche na mpụga mgbe niile: “Echere m na ụfọdụ ụdị nyocha ga-ekwe omume n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile. Ma ma anyị kpọrọ ya ọrụ ma ọ bụ anyị kpọọ ya nghọta, enwere ọkwa dị iche iche na mmuta dị iche iche n'etiti ndị nkịtị na-achọ ịmata maka ego “.
Kadịnal Pell kwuputakwara na ọtụtụ nsogbu ego Vatican na-enwe ugbu a, ọkachasị arụrịta ụka nke ihe onwunwe na London, enwere ike igbochi, ma ọ bụ "amata n'oge na-adịghị anya," ma ọ bụrụ na akagbuchaghị nyocha mpụga nke Pricewaterhouse Cooper. na Eprel 2016 ..
Banyere mgbanwe ego e mere na Vatican n'oge gara aga, dịka ịnyefe njikwa ego site na Secretariat nke State na APSA, Kadịnal ahụ kwuru na mgbe ọ nọ na Vatican, ọ sịrị na ọ baghị oke mkpa na-achịkwa ụfọdụ akụkụ ego ahụ, mgbe ahụ na ọ bụ jisiri ike nke ọma nakwa na Vatican na-ahụ ezigbo nloghachi na itinye ego.
Nyefee na APSA ga-eme nke ọma ma tozuru oke, ka o kwuru, na Isi nke Economy ga-enwerịrị ike ịkwụsị ihe ma ọ bụrụ na a ga-akwụsị ha.
Ọ gbakwụnyere, "Atụmatụ popu ịtọlite ​​kansụl nke ndị ọkachamara maka njikwa ego, na-apụta na Covid, site na nrụgide ego anyị na-enwe, ga-adị oke mkpa."
Dabere na Kadịnal Pell, ego enyemaka popu, nke a kpọrọ Peter's Pence, "chere nnukwu nsogbu ihu." Ego a bụ maka ọrụ ebere nke popu na iji kwado ụfọdụ ụgwọ njikwa nke Roman Curia.
Ekwesighi iji ego ahụ mee ihe maka itinye ego, ọ sịrị, na-ekwu na ọ "agbaala mgba ruo ọtụtụ afọ maka ụkpụrụ bụ na ọ bụrụ na ndị na-enye onyinye na-enye ego maka otu ebumnuche, a ga-eji ya maka ebumnuche ahụ."
Ka a na-ekwupụta mgbanwe ego na Vatican, Kadịnal ahụ kwusiri ike mkpa inwe ezigbo ndị ọrụ.
O kwuru na inwe ndị tozuru etozu na-ahụ maka ihe gbasara ego bụ ihe mbụ dị oke mkpa iji gbanwee ọdịnala ka ọ bụrụ nke nnabata na nghọta zuru oke.
"Enwere ezigbo njikọ dị n'etiti enweghị ọrụ na izu ohi," ka Kadịnal Pell kwuru. "Ọ bụrụ na ị nwere ndị tozuru etozu maara ihe ha na-eme, ọ ga-aka esiri gị ike ihi ohi."
Na diọcese, otu ihe dị mkpa bụ inwe ọgbakọ kansụl maka ego nwere ndị nwere mm ụta "na-aghọta ego", na-ezukọkarị, nke bishọp na-ajụ ma onye ndụmọdụ ọ na-agbaso.
"Ihe egwu dị ma ọ bụrụ na kansụl na-ahụ maka ego gị anaghị aghọta na ị bụ ụka ma ọbụghị ụlọ ọrụ." Ihe mbu abughi uru ego, kama ilekọta ndi ogbenye, ndi na adighi nma, ndi oria na ndi mmadu.
Kadịnal a toro onyinye nke ndị nkịtị, na-asị: "na ọkwa niile, site na dayọsis, na archdịọcese, na Rome, eturu m site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị tozuru oke dị njikere itinye oge ha na Churchka n'ihe efu".
"Anyị chọrọ ndị ndu ndị nkịtị n'ebe ahụ, ndị ndu thereka ebe ahụ, ndị ma ọrụ nchịkwa ego, ndị nwere ike ịjụ ajụjụ ziri ezi wee chọta azịza ziri ezi."
Ọ gbakwara diocese ume ka ha ghara ichere ka Vatican na-ebute ụzọ mgbe niile n'ọrụ mmezigharị ego, ọ bụrụgodi.
“Anyị enweela ọganihu na Vatican ekwetakwara na Vatican kwesịrị ibute ụzọ - Pope Francis maara nke a ma na-agba mbọ ime nke a. Mana dịka ọgbakọ ọ bụla, ị gaghị enwe ike ime ya oge ọ bụla ị chọrọ, ”ka o kwuru.
Kadịnal Pell dọrọ aka na ntị na ego nwere ike ịbụ "ihe na-emerụ emerụ" ma masịkwa ọtụtụ ndị ụka. O kwuru, sị: "Arụrụ m ụkọchukwu ọtụtụ afọ mgbe mmadụ gosipụtara ihe ize ndụ nke ego metụtara ihu abụọ," "Ọ bụghị ihe kacha mkpa anyị na-eme."
"Maka Churchka, ego abụghị nke mbụ dị mkpa ma ọ bụ nke dị mkpa".
A mara Cardinal Pell na mbụ na Australia na 2018 maka ọtụtụ ebubo mmetọ mmekọahụ. N’April 7, 2020, Courtlọikpe Kasị Elu nke Australia kagburu afọ isii a mara ya ikpe ịga mkpọrọ. Courtlọikpe Kasị Elu kwuru na ekwesighi ịchọta ya ikpe ebubo ndị ebubo yana na ndị ikpe ahụ egosighi ikpe ha karịa oke obi abụọ.
Kadịnal Pell nọrọ ọnwa iri na atọ n'ụlọ mkpọrọ naanị ya, oge anaghị ekwe ya mee emume mass.
Kadịnal ahụ echebeghị nyocha canonical na Congregation for the Doctrine of the Faith na Rome, n'agbanyeghị na a kagburu nkwenye ya, ọtụtụ ndị ọkachamara canonical kwuru na ọ ga-abụ na ọ gaghị eche ikpe trialka.